Kacdoonka Jidwaaq Xaq mise Xasarad | Faafan News
Kacdoonka Jidwaaq Xaq mise Xasarad
February 4, 2018 | Filed under: WARARKA MAANTA | Posted by: A.C.C AWGA
Dad badan ayaa laga yaabaa inay is waydiinayaan kacdoonka beeshajidwaaq ayxiligan kaceen ma xaq baa misewaa xasarad ku wajahan cid gaara? jawaabta suaashani waxay u baahantahay inaan baadhitaan iyo qiimayn kusamayno oo aan dhinacyo badan ka eegno kacdoonka arimaha ku xeeran.
kacdoonka waxaauu soobilawday mudo laba sanadood ku dhawaad ah. Bulshada jidwaaq ee USA iyo yurub waxay ahayd bulshadii hirgalisay guulihii dawlada deegaanku ka soo hoysay siyaada arimaha arimaha dibada ee itoobiya oo cakirayd oo ay dhaawac adag soo gaadhsiiyeen xoogaga isbadal doonka ah kazoo horjeeday nidaamka EPRDF hormoodka ka tahay ee wadanka lagu dhaqayay. Sumcada maamulka addiss ababa fadhida ee dibadu waxay ahayd mid dhulka taala.
Safarkii ugu horeeyay ee maamulka deegaanka soomaalidu uuugu soo baxa waxaa hogaaminayay Abdifataax sheikh Cabdilaahiyare oo markaa ahaa gudoomiyaha xisbiga ESDL waxayna ku mareen magaalada Stockholm iyo London. Waxaa ka soo qaybgalay dad aan ka badnay 100 qof oo u badan beesha jidwaaq iyo sheekhaal.Goobtaa shirku ka dhacayay ooahayd safaarada Ethiopia ee London waxaa ku mudaharaadayay dhamaan dumarka iyo raga manta haysta xafiisyada iyo ganacsiga deegaanka oo ahaa ONLF. waxaakamid ahaa wasiirkii hore ee Qurba joogta.
Safarkii labaad waxaa uu maamulka deegaanku ku bixiyay London iyo Minneapolis waxaan hagayay beesha jidwaaq oo uu cabdi Maxamuud cumar magan uGu ahaa inay ka difaacaan ONLF iyo Oromo iskaashanay.Waxaa abaabulayay Raga manta hor kacaya kacdoonka jidwaaq.
Cabdi markii uu noqday ee uu warbixinta xafiiska raysal wasaaraha siinayay waxaa uu usheegay sidan: waxaan ku soo guulaysanay inaa gacanta ku soo dhigno mucaaradkii deegaanka oo ahaa beesha ogaadeen dadkaa aad kameerada ka arkaysaana waa Beesha ogaadeen ee qurbaha ku nool. cabdi waxaa u suuro gashay in uu ka guulaysto ONLF tii sheegi jirtay inay dibada xoog ku leeyihiin oo meel ay mareen lawaayay.
Waxaa kamidahaa hadaladiisii shirarka cida dhimanaysaa labada dhanba waa ogaadeen intaad dhimanaysaana beelaha kale dadkoodii way horumareen. Cabdi waxa uu jaanis ulehay in uu ONLF qaadhaankeeda hoos u bixin jiray uu shir hoose lagalo inta aan waxba ogayn ee cadawga uhaysatana loo sharaxo.
Heshiis hoose ayaa London ku dhexmaray cabdiiyo ONLF oo ahaa waxaan idinku wareejin maamulka deegaanka ee idina I taageera isagoo sheegay in Nabad diidka lagu shaanbadeeyo Reer isahaaq maadaamoo ay Lego ka raaceen.
Dhamaan xubnaha beeshiisa oo dhan waxay si halhal ah u galeen Deegaanka iyagoo qurba jog sheeganaya, waxayna qayb ka noqdeen maamulka deegaan iyagoo tacadi iyo layn ku bilaabay beesha jidwaaq, reer isahaaq, cawlyahan, makaahiil iyo reer warfaa.
Marka ay qurbajoogtii deegaanku tagaan jigjiga waxaa loo qaabilay meeqaan aad u hoosaysa jidwaaqii aabaha u ahaa guusha. waxaana dadkoodii lagu bilaabay in la xidh xidho maadaamaoo cabdi iyo ONLF garabka beeshiisu ay heshiisku galeen in at galaan dhulka remoodka ah ee jidwaaq dago si loo beegsado beesha.
Tani waxay ka cadhay siisay qurbajoogtii beesha oo aragtay in awrka lagu kacsanayay abtiyaal tiina ay ahayd shirqool loodhigay. Dhalinyarada jidwaaq waxay bilaabeen inay kacaan oo ay ka dhiidhiyaan tacadiga ay kamid tahay nidaamka dibu curashada oo loogu talagalay in lagu curyaamiyo reer isahaaq, cawlyahan, reer warfaa iyo jidwaaq. Beesha jidwaaq shir aya ka iclaamiyeen USA cabdi waxaa uu u maleegay khayaano isagoo dhulka is dhigay oo ku andacooday abtiyaal oo soo ururiyay dhamaan waxgaradkii beesha lana hadal siiyay dhalinyaradii iyo odayaashii kacdoonka waday oo u sheegay inuu fulinayo dhamaan shuruudihii ay codsadeen oo ahaa todoba qodob. kadib markii ay kala tageen kacdoonkii cabdi inuu shuruudihii fuliyo iska daaye waxaa ku bilaabay beesha xidhay layn, curyaamin dhaqale iyo iyo shaqo ka cayrin.
Mudo ayay ku qaadatay beesha inay dib isu soo urursato maadaamoo ay dhalinyaradii ka xanaaqeen dhicisawgii ku yimid kacdoonka. waxayna arintu ka soo laba kaclaysay dhinaca yurub iyadoo at ciyaarta ku soo biireen wajiyo cusub oo beesha dhexdeeda iyo deegaanka sumcad kuleh. Tani waxay sahashay in laqabto shirkii ugu horeeyay ee swiden oo ahaa mid taariikhi ah.
Hadii beesha jidwaaq oo ah beel beelaha deegaanka ka midihi ay go’aan satay inay diidaan oo ay ka gil gishaan dulmiga lama oran karo maxay hada ka hor nidaamka u taageersanayen, sabastuna waxay tahay waxaa ilawbanaa kaligii taiye dad cun ah oo dhani waxaa uu sanada ha hore ee maamulki isu ekaysiiyaa daacad waxqabad ku sifoobay oo dad iyo dalba jecel.
Waxaa laga yaabaa inay dad badani is yiraahdaan maxay jid waaq hada ka hor uga qaybqaadan waayeen halganka oo ay hada isu badaleen? jawaabtu waa jidwaaq isma badaline waxa is badalay cabdi oo ku biiray ONLF iyo kuwa ku doodaya waa in cabdi lataageero indho la’aan.
kuwaa waxaan leenahay war jidwaaq cabdi hada ka hor madiline adiguu ku xasuuqa. Hadaad adigu markii uu ku dilayay kiciwayday Jidwaaq xaq uguma lihid inaad tiraahdo maad ii kacdid hadiiba aad manta aaminsantahay in cabdi nin fiican oo in loo hiiyo oo la garab istaago mudan uu yahay waxaad cadaynaysaa markii adiga uu ku dilayayna wuu saxnaa ee imika markuu jidwaaq dilay ayunbuu khaldan yahay. Cabdi na xukun baad is ku hayseene halgan iyo masiirka umada soomaalida is kumaydaan haynin. Waxaa halganka dad uga dhigayseena waxaa uu ahaa inaad awooda la wareegitaan siaad beelaha kale ugu tacadidaan.
Waxaa tan ka maqraati kacaysa hadii maanta iyadoo xaalada cadaadiska iyo dulmiga umada soomartay ay gaadhay heerkii ugu saraysay abid tigreena isagoo aad utabardaran aad heshiis ugula galaysaan in mindida markiina laydiin dhiibo si aad kawaanka umada lagu qalo u fuushaan.
Gabgabadii kacdoonka jidwaaq waa barqo markii lahelaba caano macaan waana mid xaqa oo aan cidna in lagu dulmiyo loo abaabulin. cidii ka hortimaadaana waa cadaw dhaba u ah umada una adeegaysa masiirka umada dano shiqsiyadeed iyo dhiig miirato nimo.